လူမှုရေး – Shwe Myanmar
လင်နဲ့မယားမှာ အပြန်အလှန် တင်ရမဲ့ကျေးဇူးတွေရှိကြတယ်
အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီးဟာ အပျိုဘဝကထက်ပိုလှနေတယ်၊ ပိုတင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ ခင်ပွန်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ လို့ ဆိုကြတယ်။
အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမျိုးသားဟာ လူပျိုဘဝတုန်းကထက်ပိုပြီး ခန့်ညားတင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင် သူဟာ ဇနီးကောင်းကို ရရှိထားလို့လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အပျို၊ လူပျို ဘဝမှာထက်ပိုပြီး တင့်တယ်နေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေကတော့ ရှေးရေစက်ကြောင့်ဆုံရတဲ့ စုံတွဲ၊ ကုသိုလ်အတူတူပြုဖို့ နတ်ဖက်တဲ့အတွဲလို့လည်း ဆိုကြပြန်တယ်။အဲဒီအဆိုတွေကို ကျွန်မကတော့ နားလည်လက်ခံမိပါတယ်။
အများစုမှာတော့လူပျို၊အပျိုဘဝတုန်းက မိဘရဲ့အရိပ်အောက်မှာ နေရစဉ်တုန်းက လောကဓံကို ကြုံရပေမဲ့မိဘရဲ့အမိုးအကာအောက်မှာ ရှိနေတဲ့အတွက် မပြင်းထန်လှပါဘူး ကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ဖြစ်လာချိန်မှာ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး လောကဓံနှစ်မျိုးစလုံးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံပြီး ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြရပါပြီ။
အဲဒီလို ကာလမှာ ကို်ယ်တွဲဖက်ခွင့်ရထားတဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့အရည်အသွေးဟာ လည်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်နိမ့်ပါးချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုထားပြီး အငယ်နောက် လိုက်သွားတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ပိုက်ဆံလေးကို ယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်တော့ ထားပစ်ခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ ကိုယ့်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပစ်ထားတဲ့သူတွေကို ဆင်းရဲချိန်၊ နိမ့်ပါးချိန်၊ ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ တွေ့ရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို အ်ိမ်ထောင်ဘက်မျိုးနဲ့ ကြုံရတဲ့အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်မှာ ခြုံးခြုံးကျကြရတဲ့ရုပ်သွင်နဲ့သွင်ပြင် ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ မရွှင်မလန်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ညှိုးငယ်တဲ့ အသွင်က သူတို့ရရှိထားတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်တွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပြသနေကြပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ သူဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ပိုပြီး သိလာရတဲ့သူမျိုးပါ။ ကိုယ်အဆင်မပြေလို့ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ နားလည်စွာနဲ့ ဘေးကနေရှိပြီး ရင်ဆိုင်ပေးတတ်သလို၊မိသားစုအတွက် လိုအပ်ရင် ရှေ့က ထွက်ပြီး တံတိုင်းကြီးလို ကာကွယ်ပေးတယ်၊
အသေးစား စိတ်ဖိစီးမှုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြီးစားစိတ်ဖိစီးမှုတွေကုိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း အားပေးနှစ်သိမ့်ရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူ ဖြေရှင်းရင်ဆိုင်ပေးတယ်။
အဲဒီလို အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ မြင်ရတာနဲ့တင် သိသာစေတယ်။ ရွှင်လန်းတယ်၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရှိနေတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သက်ဝင်နေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု ရှိနေတဲ့အတွက် လုံခြုံမှုတစ်ခုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ အသွင်မျိုးနဲ့တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အဲဒီလို အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းရရှိထားတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ဘက်ဆိုးနဲ့ရေစက်ဆုံနေရတဲက သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကတော့ ဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်ကြပြီ ဆိုကတည်းက အတိတ်ဘဝတုန်းက ကုသိုလ်၊ အကုသုိုလ် အတူတူ ပြုဖူးခဲ့တဲ့သူတွေပါ.
ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်တွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားသင့်တယ်။ သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ ရေစက်ရှိလို့သာ ဆုံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ကတော့ ရေစက်တွေကလည်း တိုတောင်းတက်ပါသေးတယ်။
ဘဝရေးမှာပဲ ဖြစ်စြဖ် အိမ်ထောင်ရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် မတူတဲ့သူတွေကလည်း ကြာကြာအတူပေါင်းသင်းနေထိုင်လို့မရပါဘူး။ ဆိုပါတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မက ကောင်းပါလျက်နဲ့ ဇနီးသည်အပေါ် ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်းမျိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်က အကျင့်သီလမှာမတူတော့ပါဘူး။
မတူအတွဲတွေမှာ တစ်ယောက်က ကောင်းပြီး တစ်ယောက်က မကောင်းတဲ့အတွက် ကုသိုလ်၊အကုသုိုလ်တွေကလည်း မတူနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မကောင်းတဲ့သူက ကောင်းတဲ့သူနားမှာ မနေနိုင်လို့ မကောင်းတဲ့သူ အချင်းချင်းသွားပေါင်းကြတာပါ။
ဒီသဘောတရားကို နားလည်လက်ခံမယ်ဆိုရင် ကို်ယ့်နားမှာ အကုသိုလ် မကင်းတဲ့သူတွေ ကိုယ့်နားမှာ မနေနိုင်ကြတာ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့လည်း မှတ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်၊တစ်ယောက်က ကုသိုလ်ပဲပြုပြု၊အကုသိုလ်ပဲလုပ်လုပ်၊ ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်က စိတ်တူ(စိတ်ပါ)မှ ရနိုင်တယ်။ စိတ်မတူရင် မရဘူး။ ပြုလုပ်သူသာလျှင် ရတယ်လို့ ဘာသာရေးအရ မှတ်သားခဲ့ဖူးတယ်။
ပြီးတော့ မှတ်သားမိစေတာလည်း ရှိသေးတယ်.။
မောင်ပုဏ္ဏတောထဲမှာ လယ်ယာတွေကို တစ်ယောက်တည်း၊ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ လုပ်ကိုင်နေရတယ်။တစ်ရက်တော့ နံနက် ၁၁-နာရီလောက်ထိ ထမင်းမစားရသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အိမ်က ဇနီးက ထမင်းလာ မပို့သေးလို့ဖြစ်တယ်။ လူ့သဘာဝက“ဆာနေတဲ့အချိန် မစားရရင် အလွန်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်။
မောင်ပုဏ္ဏမှာလည်း နေကပူ၊အလုပ်ကပင်ပန်း၊ဗိုက်ကဆာ ထမင်းက ရောက်မလာသေး၊ ဘယ်လောက်စိတ်တိုစရာကောင်းသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေတော့။ ဟော ..နေပူကြဲကြဲချွေးရွှဲရွှဲနဲ့ ထမင်းထုပ်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး၊ခြေလှမ်းသွက်သွက်နဲ့ လာနေတဲ့ ဇနီးသည် မြင်ရတော့ သူ့ဇနီးအပေါ် ထားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ သူ့ဒေါသက အရှိန်တော့ လျော့ကျသွားတယ်။
သူ့ကို တွေ့တွေ့ချင်း ဇနီးဖြစ်သူက “မောင်ရေအချိန်နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်နော်၊ မောင့်အတွက် လာပို့တဲ့ထမင်းကို လမ်းမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်ကို လှူဒါန်းလိုက်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် နောက်တစ်ခေါက်အိမ်ပြန်ပြီး၊
ချက်ရလို့ မောင့်အတွက် နောက်ကျမှာစိုးလို့ အမြန်ချက်ပြီး အမြန်လာခဲ့ရတယ်၊ မောင် ဆာနေမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒီတော့ မောင်ရယ် လမ်းမှာလှူခဲ့တဲ့ ဆွမ်းကုသိုလ်ရဲ့ အဖို့ကို မောင့်အား အမျှပေးပါတယ်“ လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့မောင်ပုဏ္ဏကလည်း စိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ သူ့ဇနီးရဲ့သဒ္ဒါစိတ်နဲ့သူ့အပေါ် ထားရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကို ခံစားနားလည်ပြီး ဝမ်းသာလွန်းလို့ “ဝမ်းသာလိုက်တာ ရှင်မရယ်၊သာဓု ….သာဓု ..သာဓု”လို့ခေါ်လိုက်တယ်။
ဪ…ဒါနဲ့ရှင်မရေ ကိုယ်လည်း မနက်က အရှင်သာရိပုတ္တရာကို ရေနဲ့ဒန်ပူ လှူလိုက်သေးတယ်။ အဲဒါ ညီမကိုလည်းအမျှပေးပါတယ်။ “ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရယ်။ သာဓု .သာဓု”ပါလို့ အသိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် မိသားစုအစုံနဲ့ ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစားနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လှူစေချင်ပါတယ်။အဲဒီလို လှူတတ်မှလည်း ဖြစ်လေရာဘဝမှာ ပါရမီရှင် စုံတွဲတွေအဖြစ် အတူတူအကျိုးပေးကြမှာပါ။
ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူကုသိုလ်ပြုပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေရှင်။ မတူတဲ့အမြင်များကို ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေသင်္ကြန်ဟိန်(မြစ်မခ)
လငျနဲ့မယားမှာ အပွနျအလှနျ တငျရမဲ့ကြေးဇူးတှရှေိကွတယျ
အိမျထောငျကပြွီးမှ အိမျရှငျမ အမြိုးသမီးဟာ အပြိုဘဝကထကျပိုလှနတေယျ၊ ပိုတငျ့တယျနတေယျဆိုရငျ အဲဒီ အမြိုးသမီးဟာ ခငျပှနျးကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားရလို့ လို့ ဆိုကွတယျ။
အိမျထောငျကပြွီးမှ ခငျပှနျးဖွဈသူ အမြိုးသားဟာ လူပြိုဘဝတုနျးကထကျပိုပွီး ခနျ့ညားတငျ့တယျနတေယျဆိုရငျ သူဟာ ဇနီးကောငျးကို ရရှိထားလို့လို့ ဆိုကွပါတယျ။
အပြို၊ လူပြို ဘဝမှာထကျပိုပွီး တငျ့တယျနတေဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှကေတော့ ရှေးရစေကျကွောငျ့ဆုံရတဲ့ စုံတှဲ၊ ကုသိုလျအတူတူပွုဖို့ နတျဖကျတဲ့အတှဲလို့လညျး ဆိုကွပွနျတယျ။အဲဒီအဆိုတှကေို ကြှနျမကတော့ နားလညျလကျခံမိပါတယျ။
အမြားစုမှာတော့လူပြို၊အပြိုဘဝတုနျးက မိဘရဲ့အရိပျအောကျမှာ နရေစဉျတုနျးက လောကဓံကို ကွုံရပမေဲ့မိဘရဲ့အမိုးအကာအောကျမှာ ရှိနတေဲ့အတှကျ မပွငျးထနျလှပါဘူး ကိုယျ့အိမျထောငျနဲ့ ကိုယျ့မိသားစုနဲ့ဖွဈလာခြိနျမှာ ကောငျးကောငျးဆိုးဆိုး လောကဓံနှဈမြိုးစလုံးကို ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ကွုံပွီး ရငျဆိုငျဖွတျသနျးကွရပါပွီ။
အဲဒီလို ကာလမှာ ကျိုယျတှဲဖကျခှငျ့ရထားတဲ့ အိမျထောငျဘကျရဲ့အရညျအသှေးဟာ လညျး ပျေါလှငျထငျရှားလာတတျပါတယျ။
ကိုယျနိမျ့ပါးခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုထားပွီး အငယျနောကျ လိုကျသှားတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ပိုကျဆံလေးကို ယူပွီး ကိုယျ့ကိုယျတော့ ထားပဈခဲ့ပွီး ထှကျပွေးသှားတဲ့ သူတှေ၊ စိတျဆငျးရဲပွီး စိတျဓါတျကနြတေဲ့ ကိုယျ့ကို မသိခငျြယောငျဆောငျပွီး ပဈထားတဲ့သူတှကေို ဆငျးရဲခြိနျ၊ နိမျ့ပါးခြိနျ၊ ဒုက်ခရောကျခြိနျမှာ တှရေ့တော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို အျိမျထောငျဘကျမြိုးနဲ့ ကွုံရတဲ့အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးတှဟော အိမျထောငျကပြွီး နောကျမှာ ခွုံးခွုံးကကြွရတဲ့ရုပျသှငျနဲ့သှငျပွငျ ဖွဈကုနျကွတယျ။ သူတို့ရဲ့ မရှငျမလနျးတဲ့ မကျြနှာနဲ့ညှိုးငယျတဲ့ အသှငျက သူတို့ရရှိထားတဲ့အိမျထောငျဘကျတှရေဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးကို ပွသနကွေပါတယျ။
နောကျတဈမြိုးကတော့ သူဘယျလောကျကောငျးသလဲ ဆိုတာကို ကိုယျတကယျဒုက်ခရောကျခြိနျမှာ ပိုပွီး သိလာရတဲ့သူမြိုးပါ။ ကိုယျအဆငျမပွလေို့ ဒုက်ခရောကျနခြေိနျမှာ နားလညျစှာနဲ့ ဘေးကနရှေိပွီး ရငျဆိုငျပေးတတျသလို၊မိသားစုအတှကျ လိုအပျရငျ ရှကေ့ ထှကျပွီး တံတိုငျးကွီးလို ကာကှယျပေးတယျ၊
အသေးစား စိတျဖိစီးမှုပဲ ဖွဈဖွဈ အကွီးစားစိတျဖိစီးမှုတှကေုိုပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာကိုလညျး အားပေးနှဈသိမျ့ရငျးနဲ့ကိုယျနဲ့အတူတူ ဖွရှေငျးရငျဆိုငျပေးတယျ။
အဲဒီလို အိမျထောငျဘကျကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူတှကေတော့ မွငျရတာနဲ့တငျ သိသာစတေယျ။ ရှငျလနျးတယျ၊ ကနြေပျနှဈသိမျ့မှုရှိနတေဲ့ အပွုံးတှနေဲ့ လှုပျရှားမှုတှနေဲ့သကျဝငျနတေယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကနြေပျမှု ရှိနတေဲ့အတှကျ လုံခွုံမှုတဈခုကို ရရှိထားတဲ့သူတဈဦးရဲ့ အသှငျမြိုးနဲ့တှမွေ့ငျရပါတယျ။
အဲဒီလို အိမျထောငျဘကျကောငျးရရှိထားတဲ့ သူတှပေဲ ဖွဈဖွဈ၊ အိမျထောငျဘကျဆိုးနဲ့ရစေကျဆုံနရေတဲက သူတှပေဲဖွဈဖွဈ အားလုံးကတော့ ဇနီးမောငျနှံတှဖွေဈကွပွီ ဆိုကတညျးက အတိတျဘဝတုနျးက ကုသိုလျ၊ အကုသုိုလျ အတူတူ ပွုဖူးခဲ့တဲ့သူတှပေါ.
ဒါကွောငျ့ကိုယျရဲ့အိမျထောငျဘကျတှအေပျေါမှာ တနျဖိုးထားသငျ့တယျ။ သူ့နဲ့ကိုယျနဲ့ ရစေကျရှိလို့သာ ဆုံခဲ့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခြို့ကတော့ ရစေကျတှကေလညျး တိုတောငျးတကျပါသေးတယျ။
ဘဝရေးမှာပဲ ဖွဈစွဖျ အိမျထောငျရေးမှာပဲ ဖွဈဖွဈ ကုသိုလျ၊ အကုသိုလျ မတူတဲ့သူတှကေလညျး ကွာကွာအတူပေါငျးသငျးနထေိုငျလို့မရပါဘူး။ ဆိုပါတော့ အိမျထောငျရှငျမက ကောငျးပါလကျြနဲ့ ဇနီးသညျအပျေါ ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ခငျပှနျးမြိုး ရှိနတေယျဆိုရငျ သူနဲ့ကိုယျက အကငျြ့သီလမှာမတူတော့ပါဘူး။
မတူအတှဲတှမှော တဈယောကျက ကောငျးပွီး တဈယောကျက မကောငျးတဲ့အတှကျ ကုသိုလျ၊အကုသုိုလျတှကေလညျး မတူနိုငျတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့ မကောငျးတဲ့သူက ကောငျးတဲ့သူနားမှာ မနနေိုငျလို့ မကောငျးတဲ့သူ အခငျြးခငျြးသှားပေါငျးကွတာပါ။
ဒီသဘောတရားကို နားလညျလကျခံမယျဆိုရငျ ကျိုယျ့နားမှာ အကုသိုလျ မကငျးတဲ့သူတှေ ကိုယျ့နားမှာ မနနေိုငျကွတာ ကိုယျ့အတှကျကောငျးတယျလို့လညျး မှတျယူလို့ရပါသေးတယျ။
တကယျတော့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျ၊တဈယောကျက ကုသိုလျပဲပွုပွု၊အကုသိုလျပဲလုပျလုပျ၊ ကနျြတဲ့ တဈယောကျက စိတျတူ(စိတျပါ)မှ ရနိုငျတယျ။ စိတျမတူရငျ မရဘူး။ ပွုလုပျသူသာလြှငျ ရတယျလို့ ဘာသာရေးအရ မှတျသားခဲ့ဖူးတယျ။
ပွီးတော့ မှတျသားမိစတောလညျး ရှိသေးတယျ.။
မောငျပုဏ်ဏတောထဲမှာ လယျယာတှကေို တဈယောကျတညျး၊ဆငျးရဲပငျပနျးစှာ လုပျကိုငျနရေတယျ။တဈရကျတော့ နံနကျ ၁၁-နာရီလောကျထိ ထမငျးမစားရသေးဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အိမျက ဇနီးက ထမငျးလာ မပို့သေးလို့ဖွဈတယျ။ လူ့သဘာဝက“ဆာနတေဲ့အခြိနျ မစားရရငျ အလှနျဒေါသဖွဈတတျတယျ။
မောငျပုဏ်ဏမှာလညျး နကေပူ၊အလုပျကပငျပနျး၊ဗိုကျကဆာ ထမငျးက ရောကျမလာသေး၊ ဘယျလောကျစိတျတိုစရာကောငျးသလဲဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့ပတေော့။ ဟော ..နပေူကွဲကွဲခြှေးရှဲရှဲနဲ့ ထမငျးထုပျခေါငျးပျေါရှကျပွီး၊ခွလှေမျးသှကျသှကျနဲ့ လာနတေဲ့ ဇနီးသညျ မွငျရတော့ သူ့ဇနီးအပျေါ ထားတဲ့မတ်ေတာစိတျနဲ့ သူ့ဒေါသက အရှိနျတော့ လြော့ကသြှားတယျ။
သူ့ကို တှတှေ့ခေ့ငျြး ဇနီးဖွဈသူက “မောငျရအေခြိနျနောကျကသြှားတာ ခှငျ့လှတျနျော၊ မောငျ့အတှကျ လာပို့တဲ့ထမငျးကို လမျးမှာ ရှငျသာရိပုတ်တရာ မထရျေမွတျကို လှူဒါနျးလိုကျတယျ၊ အဲဒါကွောငျ့ နောကျတဈခေါကျအိမျပွနျပွီး၊
ခကျြရလို့ မောငျ့အတှကျ နောကျကမြှာစိုးလို့ အမွနျခကျြပွီး အမွနျလာခဲ့ရတယျ၊ မောငျ ဆာနမေယျဆိုတာ သိပါတယျ။ ဒီတော့ မောငျရယျ လမျးမှာလှူခဲ့တဲ့ ဆှမျးကုသိုလျရဲ့ အဖို့ကို မောငျ့အား အမြှပေးပါတယျ“ လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီတော့မောငျပုဏ်ဏကလညျး စိတျမဆိုးဘဲနဲ့ သူ့ဇနီးရဲ့သဒ်ဒါစိတျနဲ့သူ့အပျေါ ထားရှိတဲ့မတ်ေတာစိတျကို ခံစားနားလညျပွီး ဝမျးသာလှနျးလို့ “ဝမျးသာလိုကျတာ ရှငျမရယျ၊သာဓု ….သာဓု ..သာဓု”လို့ချေါလိုကျတယျ။
ဪ…ဒါနဲ့ရှငျမရေ ကိုယျလညျး မနကျက အရှငျသာရိပုတ်တရာကို ရနေဲ့ဒနျပူ လှူလိုကျသေးတယျ။ အဲဒါ ညီမကိုလညျးအမြှပေးပါတယျ။ “ဝမျးသာလိုကျတာမောငျရယျ။ သာဓု .သာဓု”ပါလို့ အသိအမှတျပွုလိုကျတယျ။
ဖွဈနိုငျရငျ မိသားစုအစုံနဲ့ ရိုရိုသသေေ လေးလေးစားစားနဲ့ စိတျတူကိုယျတူ အလှူရစေကျလကျနဲ့မကှာ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လှူစခေငျြပါတယျ။အဲဒီလို လှူတတျမှလညျး ဖွဈလရောဘဝမှာ ပါရမီရှငျ စုံတှဲတှအေဖွဈ အတူတူအကြိုးပေးကွမှာပါ။
ခဈြတဲ့သူနဲ့အတူတူကုသိုလျပွုပါလို့တိုကျတှနျးပါရစရှေငျ။ မတူတဲ့အမွငျမြားကို ဆှေးနှေးဖို့ဖိတျချေါပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ မသေင်ျကွနျဟိနျ(မွဈမခ)
“ကိုယျ့ယောင်ျကြား အိမျမွဲစခေငျြရငျ မိနျးမတို့ ဒါတှရှေောငျပါ”
ကိုယ့်ယောင်္ကျား အိမ်မြဲပြီး ကိုယ့်အနားမှာပဲ အမြဲရှိစေချင်တဲ့ ဇနီးတို့အနေနဲ့ ဒီအောက်မှာ ပြောပြထားတဲ့အချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးကြည့်နော်။
အိမ်ရှင်မလေးတို့အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သက်လာကြာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ယောင်္ကျားက အိမ်မကပ်ဘူး၊ အပြင်မှာပဲ အမြဲနေချင်တယ်ဆိုတာမျိုး ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ယောင်္ကျားအိမ်မှာ မြဲစေဖို့အတွက် အိမ်ရှင်မလေးတို့ ဆောင်ရ ရှောင်ရမှာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့
အိမ်ရှင်မလေးတို့ ရှောင်ရမှာတွေကို ပြောပြမယ်နော်။ ကိစ္စတိုင်းကို ပြဿနာလို့ မြင်တာမိန်းကလေးတွေရဲ့အဓိက ပြဿနာကလည်း စိတ်ပူတတ်တာ၊
စိုးရိမ်တတ်တာ၊ ပွစိပွစိလုပ်တာနဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို ပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခု အဖြစ် တွေးမြင်တတ်တာပါ။ ဒီတေ့ာ အိမ်က ပူပင်တာတွေ ဖြစ်ပြီး
မအေးချမ်းတာတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ယောက်ျားတော်တေ်ာများများက အိမ်ကပ်တဲ့အချိန် နည်းလာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းပြီး ပူညံပူညံလုပ်တာတွေ လျှော့ပါ။ အရမ်းညဉ်းတွားတတ်တာတွေ ရှောင်ပါ။
အသေးစိတ် ချုပ်ချယ်တာဘယ်သူမဆို ချစ်လို့ ဂရုစိုက်တာကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် အသေးစိတ် ချုပ်ချယ်လွန်းတာကိုတော့ မကြိုက်ကြပါဘူး။
ယောင်္ကျားလေးတွေမှာလည်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ချင်တာ၊ ဘယ်သွားမှာလဲ၊ ဘာလုပ်မှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာလဲ အစရှိသလို
မသွားရသေးဘူး မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်ညစ်အောင် ပြောတာက ယောက်ျားကို စိတ်ညစ်စေတဲ့ အကြေင်းအရာပါ။
အသေးစိတ်ချုပ်ချယ်တာတွေ လျှော့ချပါ။ အပြင်သွားတဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်နေရာသွားတယ် ဘယ်တော့လောက် ပြန်လာမယ်ဆိုတာလောက်ပဲ မေးပါ။
ဖုန်းဆက်ရင် ကိုင်ဖို့တော့ ကြိုတင်ပြောထားလိုက်ပါနော်။အသုံးစရိတ် – ကိုယ့်ယောင်္ကျားရဲ့ အသုံးစရိတ်ကို အတိအကျ အတင်းကြီး ကန့်သတ်တာ၊
ပိုက်ဆံ နည်းနည်းလေး သုံးမိတာနဲ့ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး ပြောတာတွေက အိမ်ထောင်ရေး မသာယာမှုတွေ ဖြစ်စေပြီး အိမ်မမြဲစေတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထိုက်အလျောက်တော့ ပေးသုံးပါနော်။ ဖုန်းတွေ စစ်တာ – သဝန်တိုတာက ချစ်လို့ဆိုပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ သဝန်တိုပါနော်။
ကိုယ်က ဖုန်းတွေ စစ်မယ်၊ စာတွေလည်း တောက်လျှောက် စစ်နေတာက ပူလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားမိရင်
ယောင်္ကျားက အိမ်ကို ပြန်လာချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အိမ်မှုကိစ္စတွေ မပျက်ကွက်ပါနဲ့ – အိမ်ရှင်မလေးတွေအနေနဲ့ အလုပ်လည်း လုပ်ရတယ်ဆိုရင်တောင်
အိမ်မှုကိစ္စတွေကို မမေ့ထားပါနဲ့နော်။ ပိတ်ရက်လေးတွေမှာတော့ ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးတာမျိုး လုပ်ပေးနေ်ာ။
မပြင်မဆင် နေတာ – အလှအပကို မကြိုက်တဲ့သူဆိုတာ ရှိတောင် ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်သက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာ အလှပြင်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့
တွေးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လှလှပပလေး နေသင့်ပါတယ်နော်။ လှလှလေး ပြင်ဆင်ထားမှ ကိုယ့်ယောကျာ်းက ကိုယ့်အနားနေမှာပါ။
ကိုယ့်ယောင်္ကျား အိမ်မြဲပြီး ကိုယ့်အနားမှာပဲ အမြဲရှိစေချင်တဲ့ ဇနီးတို့အနေနဲ့ အပေါ်က ပြောပြထားတဲ့အချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးကြည့်နော်။
ကိုယျ့ယောင်ျကြား အိမျမွဲပွီး ကိုယျ့အနားမှာပဲ အမွဲရှိစခေငျြတဲ့ ဇနီးတို့အနနေဲ့ ဒီအောကျမှာ ပွောပွထားတဲ့အခကျြလေးတှေ လုပျဆောငျပေးကွညျ့နျော။
အိမျရှငျမလေးတို့အနနေဲ့ အိမျထောငျသကျလာကွာတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ယောင်ျကြားက အိမျမကပျဘူး၊ အပွငျမှာပဲ အမွဲနခေငျြတယျဆိုတာမြိုး ကွုံလာနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ယောင်ျကြားအိမျမှာ မွဲစဖေို့အတှကျ အိမျရှငျမလေးတို့ ဆောငျရ ရှောငျရမှာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့
အိမျရှငျမလေးတို့ ရှောငျရမှာတှကေို ပွောပွမယျနျော။ ကိစ်စတိုငျးကို ပွဿနာလို့ မွငျတာမိနျးကလေးတှရေဲ့အဓိက ပွဿနာကလညျး စိတျပူတတျတာ၊
စိုးရိမျတတျတာ၊ ပှစိပှစိလုပျတာနဲ့ ကိစ်စတိုငျးကို ပွဿနာအကွီးကွီးတဈခု အဖွဈ တှေးမွငျတတျတာပါ။ ဒီတေ့ာ အိမျက ပူပငျတာတှေ ဖွဈပွီး
မအေးခမျြးတာတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားက အိမျကပျတဲ့အခြိနျ နညျးလာတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဘယျကိစ်စကိုမဆို အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွရှေငျးပွီး ပူညံပူညံလုပျတာတှေ လြှော့ပါ။ အရမျးညဉျးတှားတတျတာတှေ ရှောငျပါ။
အသေးစိတျ ခြုပျခယျြတာဘယျသူမဆို ခဈြလို့ ဂရုစိုကျတာကို လကျခံနိုငျပမေယျ့ အသေးစိတျ ခြုပျခယျြလှနျးတာကိုတော့ မကွိုကျကွပါဘူး။
ယောင်ျကြားလေးတှမှောလညျး အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ အပွငျထှကျခငျြတာ၊ ဘယျသှားမှာလဲ၊ ဘာလုပျမှာလဲ၊ ဘယျအခြိနျပွနျလာမှာလဲ အစရှိသလို
မသှားရသေးဘူး မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ စိတျညဈအောငျ ပွောတာက ယောကျြားကို စိတျညဈစတေဲ့ အကွငျေးအရာပါ။
အသေးစိတျခြုပျခယျြတာတှေ လြှော့ခပြါ။ အပွငျသှားတဲ့အခါမှာလညျး ဘယျသူနဲ့ ဘယျနရောသှားတယျ ဘယျတော့လောကျ ပွနျလာမယျဆိုတာလောကျပဲ မေးပါ။
ဖုနျးဆကျရငျ ကိုငျဖို့တော့ ကွိုတငျပွောထားလိုကျပါနျော။အသုံးစရိတျ – ကိုယျ့ယောင်ျကြားရဲ့ အသုံးစရိတျကို အတိအကြ အတငျးကွီး ကနျ့သတျတာ၊
ပိုကျဆံ နညျးနညျးလေး သုံးမိတာနဲ့ စိတျဆိုးမာနျဆိုး ပွောတာတှကေ အိမျထောငျရေး မသာယာမှုတှေ ဖွဈစပွေီး အိမျမမွဲစတောတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အထိုကျအလြောကျတော့ ပေးသုံးပါနျော။ ဖုနျးတှေ စဈတာ – သဝနျတိုတာက ခဈြလို့ဆိုပမေယျ့ အတိုငျးအတာတဈခုထိပဲ သဝနျတိုပါနျော။
ကိုယျက ဖုနျးတှေ စဈမယျ၊ စာတှလေညျး တောကျလြှောကျ စဈနတောက ပူလောငျမှုတှေ ဖွဈပွီး သူ့ကို အမွဲစောငျ့ကွညျ့နတေယျလို့ ခံစားမိရငျ
ယောင်ျကြားက အိမျကို ပွနျလာခငျြမှာ မဟုတျပါဘူးနျော။ အိမျမှုကိစ်စတှေ မပကျြကှကျပါနဲ့ – အိမျရှငျမလေးတှအေနနေဲ့ အလုပျလညျး လုပျရတယျဆိုရငျတောငျ
အိမျမှုကိစ်စတှကေို မမထေ့ားပါနဲ့နျော။ ပိတျရကျလေးတှမှောတော့ ထမငျးဟငျးခကျြကြှေးတာမြိုး လုပျပေးနျော။
မပွငျမဆငျ နတော – အလှအပကို မကွိုကျတဲ့သူဆိုတာ ရှိတောငျ ရှိမှာ မဟုတျပါဘူး။ အိမျထောငျသကျကွာသှားတဲ့အခါမှာ အလှပွငျစရာ မလိုတော့ဘူးလို့
တှေးတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ လှလှပပလေး နသေငျ့ပါတယျနျော။ လှလှလေး ပွငျဆငျထားမှ ကိုယျ့ယောကျြားက ကိုယျ့အနားနမှောပါ။
ကိုယျ့ယောင်ျကြား အိမျမွဲပွီး ကိုယျ့အနားမှာပဲ အမွဲရှိစခေငျြတဲ့ ဇနီးတို့အနနေဲ့ အပျေါက ပွောပွထားတဲ့အခကျြလေးတှေ လုပျဆောငျပေးကွညျ့နျော။
“စိတျဓာတျကနြတေဲ့ မိနျးကလေးမြား စိတျခမျြးသာအောငျနထေိုငျနညျး…”
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ မိန်းကလေးများ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်နည်း…
မိန်းကလေး…သင် စိတ်ဓာတ် ကျနေလား ၊
စိတ်ချမ်းသာအောင် ဒီလိုလေးတွေ နေကျိလိုက်ပါ…
– ညမှာအိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါ
– အမြဲ ပြုံးနေလိုက်ပါ
– ရေချိုး ခေါင်းလျော်ပါ
– အင်္ကျီ ဘောင်းဘီ အသစ်ဝတ်ပါ
– ဝတ်နေကျ Style ပြောင်းလိုက်ပါ
– lotion/ ရေမွှေး ပြောင်းသုံးပါ
– အပြင်ထွက် စားပါ
– ဆံပင် style ၊ color ပြောင်းပါ
– နုတ်ခမ်းနီ အရောင်တောက်တောက်လေး ဆိုးပါ
– မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ်ပါ
– ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှသထက်လှအောင် နေပါ
– အင်္ကျီအဝတ် ကိုယ့်နဲ့ မလိုက်ဘူးထင်ရင် ဆက်မဝတ်နဲ့ ပေးပစ်လိုက်ပါ
– သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်လည်ပါ
– ကိုယ့်ကို စိတ်ရှုပ်စေ စိတ်ညစ်စေတဲ့ stress ကြီးကနေ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက် ရှောင်နေလိုက်ပါ
– ဟာသကား ကြည့်ပါ
– အားရပါးရ ရယ္လိုက္ပါ
– ငိုချင်ရင် အခန်းတံခါးပိတ် ငိုသာချလိုက်ပါ
– ရင်ဖွင့်စရာ တယောက်တောင် မရှိရင် စာအုပ်ထဲမှာ ချသာရေးလိုက်ပါ
– အခြေအနေပေးရင် ၃ ရက် ၊ ၁ ပတ် တယောက်ထဲ ခရီးထွက်လိုက်ပါ
– ဓာတ်ပုံ လှလှလေး တွေရိုက်ပါ
– နောင်တရစရာတွေ မစဉ်းစားပါနဲ့
– အလုပ်အကြောင်း ၊stress ဖြစ်စေမဲ့ အရာတွေကို ၁ ပတ်လောက် မေ့ပစ်လိုက်ပါ
– သတိရစရာ ကြုံလဲ ခဏသာ တွေးပါ
– အကြာကြီး မတွေးနဲ့
– ကိုယ့်ကိုကိုယ် မငြင်းဆဲပါနဲ့
– ယုံကြည်မှု ရှိအောင် လှလှပပ နေလိုက်ပါ
– ဝတ္ခ်င္တာ ဝတ္လိုက္ပါ
– စားချင်တာ အဝ စားလိုက် ပါ
– Ktv မှာ သီချင်းဆို အားရပါးရ ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ပါ
– သွားဖို့ အဖော် ပါစရာ မလိုဘူး/ မပါလဲ ရတယ်
– လူတွေ ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲ အတွေးတွေ ဖျောက်ပစ်လိုက်
– ကား ၊ ဆိုင်ကယ် လျောက်စီးပစ်လိုက်
အပေါ်က အချက်တွေထဲက အကုန်လုံး မဟုတ်တောင် တမျိုးမဟုတ် တစ်မျိုး လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို အနည်းဆုံးတော့ နေသာထိုင်သာ ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
စိတျဓာတျကနြတေဲ့ မိနျးကလေးမြား စိတျခမျြးသာအောငျနထေိုငျနညျး…
မိနျးကလေး…သငျ စိတျဓာတျ ကနြလေား ၊
စိတျခမျြးသာအောငျ ဒီလိုလေးတှေ နကြေိလိုကျပါ…
– ညမှာအိပျရေးဝဝ အိပျပါ
– အမွဲ ပွုံးနလေိုကျပါ
– ရခြေိုး ခေါငျးလြျောပါ
– အင်ျကြီ ဘောငျးဘီ အသဈဝတျပါ
– ဝတျနကြေ Style ပွောငျးလိုကျပါ
– lotion/ ရမှေေး ပွောငျးသုံးပါ
– အပွငျထှကျ စားပါ
– ဆံပငျ style ၊ color ပွောငျးပါ
– နုတျခမျးနီ အရောငျတောကျတောကျလေး ဆိုးပါ
– မိတျကပျ လိမျးခွယျပါ
– ကိုယျ့ကိုကိုယျ လှသထကျလှအောငျ နပေါ
– အင်ျကြီအဝတျ ကိုယျ့နဲ့ မလိုကျဘူးထငျရငျ ဆကျမဝတျနဲ့ ပေးပဈလိုကျပါ
– သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျထှကျလညျပါ
– ကိုယျ့ကို စိတျရှုပျစေ စိတျညဈစတေဲ့ stress ကွီးကနေ ၂ ရကျ ၃ ရကျလောကျ ရှောငျနလေိုကျပါ
– ဟာသကား ကွညျ့ပါ
– အားရပါးရ ရယ်လိုက်ပါ
– ငိုခငျြရငျ အခနျးတံခါးပိတျ ငိုသာခလြိုကျပါ
– ရငျဖှငျ့စရာ တယောကျတောငျ မရှိရငျ စာအုပျထဲမှာ ခသြာရေးလိုကျပါ
– အခွအေနပေေးရငျ ၃ ရကျ ၊ ၁ ပတျ တယောကျထဲ ခရီးထှကျလိုကျပါ
– ဓာတျပုံ လှလှလေး တှရေိုကျပါ
– နောငျတရစရာတှေ မစဉျးစားပါနဲ့
– အလုပျအကွောငျး ၊stress ဖွဈစမေဲ့ အရာတှကေို ၁ ပတျလောကျ မပေ့ဈလိုကျပါ
– သတိရစရာ ကွုံလဲ ခဏသာ တှေးပါ
– အကွာကွီး မတှေးနဲ့
– ကိုယျ့ကိုကိုယျ မငွငျးဆဲပါနဲ့
– ယုံကွညျမှု ရှိအောငျ လှလှပပ နလေိုကျပါ
– ဝတ်ချင်တာ ဝတ်လိုက်ပါ
– စားခငျြတာ အဝ စားလိုကျ ပါ
– Ktv မှာ သီခငျြးဆို အားရပါးရ ပေါကျကှဲပဈလိုကျပါ
– သှားဖို့ အဖျော ပါစရာ မလိုဘူး/ မပါလဲ ရတယျ
– လူတှေ ကိုယျကို ဘယျလိုမွငျမလဲ အတှေးတှေ ဖြောကျပဈလိုကျ
– ကား ၊ ဆိုငျကယျ လြောကျစီးပဈလိုကျ
အပျေါက အခကျြတှထေဲက အကုနျလုံး မဟုတျတောငျ တမြိုးမဟုတျ တဈမြိုး လုပျပဈလိုကျပါ။ ဒါဆို အနညျးဆုံးတော့ နသောထိုငျသာ ရှိသှားပါလိမျ့မယျ။
“မိသားစုတဈစုကို ဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးအရငျးမြား”
လူသားအားလုံး အတွက် အကျိုးရှိစေတာမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ပါနော်….
ကျနော်တို့လူသားတိုင်း မှာ မိသားစု အသိုက်အမြုံ ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်..။ သက်ရှိသတ္တဝါတိုင်းမှာ လည်း မိသားစုဆိုတာရှိကြစမြဲပါ ဒီမိသားစုဆိုတဲ့ လှပတဲ့ အဓိပ်ပါယျလေးက အရမ်းကို လေးနက်မှု ရှိသလို ပျော်ရွှင်အေးချမ်းဖွယ် မေတ္တာကမ္ဘာလေး ဆိုလည်း (လုံးဝ) မမှားပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမှီသဟဲ ပြုပြီး နေထိုင်နေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲကျနော့်အနေနဲ့ လူသား အားလုံးအေးချမ်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်စေလိုသော မေတ္တာဖြင့်ထောက်ပြစရာလေး အနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်..။ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့. အိမ်ထောင်စု တစ်စု မိသားစု တစ်စု ဘာ့ကြောင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲ ဒုက္ခတွေ ကို ရင်ဝယ်ပိုက်နေရသလဲ ဆိုတာလေးပါ.. လူတိုင်းသိထားသင့်သလို၊ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်မယ်လို့လည်း ကျနော့်အနေနဲ့တွေးထင် မိပါတယ်..။ကျနော်အနေနဲ့ မိသားစုတစ်ခုလုံး ဆင်းရဲတွင်းထဲနက်နက်စေတဲ့အချက်လေး တွေ ကတော့ .
(၁)အိမ်ထောင်ဦးစီး မပီသတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီး လုပ်တဲ့သူ တစ်နည်း အားဖြင့် အဖေ ကို အဓိကထားစေချင်တာပါ။ အိမ်ထောင်ဦးစီးညံ့ဖျင်းရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာဆင်းရဲမှာပဲ၊ အိမ်ထောင်ဦးစီအနေနဲ့မိန်းမယူ၊ ကလေးမွေးရုံ လောက်နဲ့တော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးမခေါ်ထိုက်သေး ပါဘူး။
မိသားစုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်းပေးရမယ့် တာဝန်တွေ ရှိသလို၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် လည်း ဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုတွေရှိမှာပဲ၊ ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ် ကို ဘယ်လိုဆက်လျှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေး အမြင်တွေလည်းရှိသင့် ရှိထိုက်ပါတယ်။ မိသားစုအရေးတွေကို လည်းရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ရှေ့က ဦးဆောင်မှုတွေလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။ ကဲအဲ့လိုမှမဟု တ်ပဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ စားလောက်ရုံလေး လုပ်မယ်၊ အိမ်ပြန် ထမင်းစား၊ အိပ်၊ထ၊စား၊သွား ဆိုယုံလောက်ပဲ လုပ်နေရင်တော့ ဒီအိမ်ဟာ သေချာတယ် ဆင်းရဲတွင်းထဲရောက်ပြီး ဒုက္ခတွေ တန်းစီပြီး ဝင်နေမှာပဲဒါ့ကြောင့် ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲနေမှာပဲ..။
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးတယ်အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်တွင်းသူခိုးရှိနေရင်လည်း ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာ ပဲ အိမ်ထောင်ဆိုတာ လင်နဲ့မယား နှစ်ဦး တည်ဆောက် ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခု ကယောက်ျားဖြစ်စေ၊ ဇနီးမယားဖြစ်စေတစ်ယောက်ယောက်ကအိမ်တွင်းသူခိုး ဖြစ်နေရင်သေချာတယ်ဆင်းရဲပြီဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာဖြင့်စားမလောက်သေးဘူး၊ကိုယ့်အမျိုးဆီ ကိုခိုးခိုးပေးနေတာ မိသားစုရှေ့ရေးကို သိပ်မတွေးဘူး။ ထင်တိုင်းကျဲနေတာမျိုး ထမင်းမငတ်ရုံတမယ်ပဲ ရပ်တည်နေသ၍တော့ အဲ့ဒီအိမ်ဟာ ဆင်းရဲမှာပဲ. နောက်တစ်နည်းက အရက်သောက်တတ်တဲ့ယောက်ျား ကလည်းခိုးမှာပဲ၊ ချဲတွေ နှစ်လုံးတွေထိုးတတ်တဲ့မိန်းမ ကလည်း ခိုးမှာ။အဲဒါဆိုသေချာတယ် ဒီအိမ်ထောင်စု ဟာ ဆင်းရဲ နေမှာပဲ။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ မိသားစုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲ အဲ့မိသားစုတွေမှာပဲ ပြဿနာတစ်ခုက အကြီးနဲ့အငယ် မတည့်တာ၊ အမနဲ့ညီမ မတည့်တာစတဲ့ စကားများ ရန်ဖြစ်တတ်တာတွေအစုံပေါ့ အိမ်တစ်အိမ်ဟာ ဘယ်တော့မှ သာယာမှုမရှိဘူး၊ နေ့တိုင်းလိုလို စကား များတတ်တယ်၊ မသိရင် သူစိမ်းတွေလိုပဲ။ သူ့ကိုလည်း အဖတ်မလုပ် င့ါကိုလည်းမလေးစား ဖြစ်နေရင်တော့ အဲ့ဒီ့ အိမ်ထောင်စုဟာ လဲပြိုပြီး ဆင်းရဲတွင်းထဲ လွတ်မြောက် နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
လူဆိုတာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနေတတ်မှ လူနဲ့ တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ လူဖြစ်တယ် ဆိုရုံပဲ သုံးလို့ရ ပါတယ်။ လူလို့ မခေါ် ထိုက်လောက်ပါဘူး။ အဓိကပြောချင်တာက ကိုယ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေစေချင်တာပါ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ သူနဲ့ငါ့အကြောင်းပြော၊ ငါနဲ့တွေ့ရင်သူ့အကြောင်းပြော လောကကြီးကိုအကောင်းမမြင်တတ်ဘူး ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးတွေရှိနေသ၍တော့ ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေနိုင် မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့လိုလူမျိုးကို ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ် ကမှ လည်း ဖေးမစောင့်ရှောက်နေမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဆင်းရဲနေမှာပဲ ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ခရီး ဆက်နိုင်နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအိမ်ဟာလည်း ဆင်းရဲနေမှာပဲ။
ကျနော်ပြောတဲ့ဒီအချက်တွေတစ်ချက်ချက်နဲ့ငြိနေတယ် ဆိုရင် ဒီမိသားစုရဲ့အနာဂတ်ဟာ လှပနေမှာ မဟုတ်နိုင် တဲ့အတွက်စာ ဖတ်ပရိတ်သတ်တွေလည်းဒီအချက်လေး တွေ ကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အေးချမ်းလှ တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးချမ်းပြီးပျော်ရွှင်လှတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို လူသားတိုင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
မိသားစုအားလုံး သာယာချမ်းမြေ့နိင်ကြပါစေ.(Credit )
လူသားအားလုံး အတှကျ အကြိုးရှိစတောမို့ ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျလိုကျပါနျော….
ကနြျောတို့လူသားတိုငျး မှာ မိသားစု အသိုကျအမွုံ ဆိုတာ ရှိကွပါတယျ..။ သကျရှိသတ်တဝါတိုငျးမှာ လညျး မိသားစုဆိုတာရှိကွစမွဲပါ ဒီမိသားစုဆိုတဲ့ လှပတဲ့ အဓိပျပါယလြေးက အရမျးကို လေးနကျမှု ရှိသလို ပြျောရှငျအေးခမျြးဖှယျ မတ်ေတာကမ်ဘာလေး ဆိုလညျး (လုံးဝ) မမှားပါဘူး။ တဈဦးနဲ့တဈဦး အမှီသဟဲ ပွုပွီး နထေိုငျနကွေတာ ပဲဖွဈပါတယျ။
ကဲကနြေျာ့အနနေဲ့ လူသား အားလုံးအေးခမျြးပွီး ပြျောရှငျဖှယျကောငျးသော မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျစလေိုသော မတ်ေတာဖွငျ့ထောကျပွစရာလေး အနညျးငယျတော့ရှိပါတယျ..။ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့. အိမျထောငျစု တဈစု မိသားစု တဈစု ဘာ့ကွောငျ့ ဆငျးဆငျးရဲရဲ ဒုက်ခတှေ ကို ရငျဝယျပိုကျနရေသလဲ ဆိုတာလေးပါ.. လူတိုငျးသိထားသငျ့သလို၊ လိုကျနာ ဆောငျရှကျသငျ့မယျလို့လညျး ကနြေျာ့အနနေဲ့တှေးထငျ မိပါတယျ..။ကနြျောအနနေဲ့ မိသားစုတဈခုလုံး ဆငျးရဲတှငျးထဲနကျနကျစတေဲ့အခကျြလေး တှေ ကတော့ .
(၁)အိမျထောငျဦးစီး မပီသတဲ့ အိမျထောငျဦးစီး
အိမျတဈအိမျမှာ အိမျထောငျဦးစီး လုပျတဲ့သူ တဈနညျး အားဖွငျ့ အဖေ ကို အဓိကထားစခေငျြတာပါ။ အိမျထောငျဦးစီးညံ့ဖငျြးရငျလညျး ဒီအိမျဟာဆငျးရဲမှာပဲ၊ အိမျထောငျဦးစီအနနေဲ့မိနျးမယူ၊ ကလေးမှေးရုံ လောကျနဲ့တော့ အိမျထောငျဦးစီးမချေါထိုကျသေး ပါဘူး။
မိသားစုတာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျးပေးရမယျ့ တာဝနျတှေ ရှိသလို၊ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှအေတှကျ လညျး ဆှေးနှေး တိုငျပငျမှုတှရှေိမှာပဲ၊ ပစ်စုပ်ပနျ အနာဂတျ ကို ဘယျလိုဆကျလြှောကျရမလဲဆိုတဲ့ အတှေး အမွငျတှလေညျးရှိသငျ့ ရှိထိုကျပါတယျ။ မိသားစုအရေးတှကေို လညျးရငျကော့ခေါငျးမော့ပွီး ရှကေ့ ဦးဆောငျမှုတှလေညျး လုပျကိုငျဆောငျရှကျ သငျ့ပါတယျ။ ကဲအဲ့လိုမှမဟု တျပဲ တဈနေ့ တဈနေ့ စားလောကျရုံလေး လုပျမယျ၊ အိမျပွနျ ထမငျးစား၊ အိပျ၊ထ၊စား၊သှား ဆိုယုံလောကျပဲ လုပျနရေငျတော့ ဒီအိမျဟာ သခြောတယျ ဆငျးရဲတှငျးထဲရောကျပွီး ဒုက်ခတှေ တနျးစီပွီး ဝငျနမှောပဲဒါ့ကွောငျ့ ဒီအိမျဟာ ဆငျးရဲနမှောပဲ..။
ဒီအခကျြကတော့ အရေးကွီးတယျအိမျတဈအိမျမှာ အိမျတှငျးသူခိုးရှိနရေငျလညျး ဒီအိမျဟာ ဆငျးရဲမှာ ပဲ အိမျထောငျဆိုတာ လငျနဲ့မယား နှဈဦး တညျဆောကျ ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာပွဿနာတဈခု ကယောကျြားဖွဈစေ၊ ဇနီးမယားဖွဈစတေဈယောကျယောကျကအိမျတှငျးသူခိုး ဖွဈနရေငျသခြောတယျဆငျးရဲပွီဆိုလိုတာက ကိုယျ့ဘကျကိုပဲကွညျ့တတျတဲ့ သူကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယျ့အိမျမှာဖွငျ့စားမလောကျသေးဘူး၊ကိုယျ့အမြိုးဆီ ကိုခိုးခိုးပေးနတော မိသားစုရှရေ့ေးကို သိပျမတှေးဘူး။ ထငျတိုငျးကြဲနတောမြိုး ထမငျးမငတျရုံတမယျပဲ ရပျတညျနသေ၍တော့ အဲ့ဒီအိမျဟာ ဆငျးရဲမှာပဲ. နောကျတဈနညျးက အရကျသောကျတတျတဲ့ယောကျြား ကလညျးခိုးမှာပဲ၊ ခြဲတှေ နှဈလုံးတှထေိုးတတျတဲ့မိနျးမ ကလညျး ခိုးမှာ။အဲဒါဆိုသခြောတယျ ဒီအိမျထောငျစု ဟာ ဆငျးရဲ နမှောပဲ။
အိမျတဈအိမျမှာ မိသားစုဆိုတာ ဖွဈပျေါလာမှာပဲ အဲ့မိသားစုတှမှောပဲ ပွဿနာတဈခုက အကွီးနဲ့အငယျ မတညျ့တာ၊ အမနဲ့ညီမ မတညျ့တာစတဲ့ စကားမြား ရနျဖွဈတတျတာတှအေစုံပေါ့ အိမျတဈအိမျဟာ ဘယျတော့မှ သာယာမှုမရှိဘူး၊ နတေို့ငျးလိုလို စကား မြားတတျတယျ၊ မသိရငျ သူစိမျးတှလေိုပဲ။ သူ့ကိုလညျး အဖတျမလုပျ င့ါကိုလညျးမလေးစား ဖွဈနရေငျတော့ အဲ့ဒီ့ အိမျထောငျစုဟာ လဲပွိုပွီး ဆငျးရဲတှငျးထဲ လှတျမွောကျ နိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
လူဆိုတာ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးထဲမှာနတေတျမှ လူနဲ့ တူတာပါ။ အဲ့လိုမှ မဟုတျရငျတော့ လူဖွဈတယျ ဆိုရုံပဲ သုံးလို့ရ ပါတယျ။ လူလို့ မချေါ ထိုကျလောကျပါဘူး။ အဓိကပွောခငျြတာက ကိုယျနတေဲ့ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အဆငျပွအေောငျ နစေခေငျြတာပါ အဲ့လိုမှမဟုတျပဲ သူနဲ့ငါ့အကွောငျးပွော၊ ငါနဲ့တှရေ့ငျသူ့အကွောငျးပွော လောကကွီးကိုအကောငျးမမွငျတတျဘူး ဆနျ့ကငျြဘကျ အတှေးတှရှေိနသေ၍တော့ ဘယျတော့မှအဆငျပွနေိုငျ မှာ မဟုတျပါဘူး ။ အဲ့လိုလူမြိုးကို ဘယျလိုပုဂ်ဂိုလျ ကမှ လညျး ဖေးမစောငျ့ရှောကျနမှော မဟုတျတဲ့အတှကျ ဆငျးရဲနမှောပဲ ဘယျတော့မှ အဆငျပွပွေနေဲ့ ခရီး ဆကျနိုငျနမှောမဟုတျတဲ့အတှကျ ဒီအိမျဟာလညျး ဆငျးရဲနမှောပဲ။
ကနြျောပွောတဲ့ဒီအခကျြတှတေဈခကျြခကျြနဲ့ငွိနတေယျ ဆိုရငျ ဒီမိသားစုရဲ့အနာဂတျဟာ လှပနမှော မဟုတျနိုငျ တဲ့အတှကျစာ ဖတျပရိတျသတျတှလေညျးဒီအခကျြလေး တှေ ကို ရှောငျကဉျြနိုငျကွမယျဆိုရငျ ဝမျးသာပါတယျ။ ဒီအခကျြတှနေဲ့လှတျမွောကျနိုငျမယျဆိုရငျ အေးခမျြးလှ တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အေးခမျြးပွီးပြျောရှငျလှတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို လူသားတိုငျး ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ လို့ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
မိသားစုအားလုံး သာယာခမျြးမွနေိ့ငျကွပါစေ.(Credit )
“အိမျထောငျပွုတော့မယျဆိုရငျ အထူးဆငျခွငျသငျ့၊ရှောငျရှားသငျ့သညျ့”ကှာသုံးကှာ၊ ခြာသုံးခြာ၊ ပါသုံးပါ”အကွောငျး”
ကွာ သုံး ကွာ၊ ချာ သုံး ချာ၊ ပါ သုံး ပါဆို တဲ့ အကြောင်း ဗဟုသုတလေး ပါ လွတ်လပ် စွာ ရှယ်ယူ နိုင်ပါသည်
“အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည် စုပ်ထိုး၊ ကျောင်းထိုင်ပင့်၊မြတ်သံဃာ၊ စာချုပ်ရန်ခက်သည့်အမျိုး။” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိများ ဆိုမိန့်စကားရှိပါတယ်
အရွယ်ရောက်လာကြသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း (အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးကလွဲရင်)အိမ်ထောင်ပြုကြ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါမှာလည်း
မိဘပေးစား လို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ ကိုယ်အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြ လို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစုံမျိုးဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုပြု
အထူး ဆင်ခြင်သင့်၊ ရှောင်ရှားသင့်သည့် “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောင်ရှားကြပါလို့ ရှေးပညာရှိများက သတိပေးပြောဆိုဆုံးမခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်မှာ ဆိုးသည့် အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အခါမှာ “ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက်နာကြဖို့လိုပါတယ်။
လူမျိုးကွာခြားခြင်း ဆိုတာ လူမျိုးခြားကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် ရွေးချယ်မိတဲ့ မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကိုယ့်မွေးဖွားလာမယ့် ရင်သွေးငယ်လေးတွေက
လူမျိုးခြားစိတ်ပေါက်သွားရင် ကိုယ့်လူမျိုးတဖြေးဖြေး တုံးပြီး ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်လို့ပါ။
၂။ အယူ ဘာသာကွာခြားခြင်း။
အယူဘာသာ ကွာခြားသူကို အိမ်ထောင် ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ် မိတဲ့ သူများဟာ ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က အခြားဘာသာဖြစ်နေရင်
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေ အနည်းနဲ့အများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ
ဒါန သီလ ဘာဝနာ တရားများကို ကျင့်ကြံနေတဲ့ သမ္မာဒဋ္ဌိ အယူမှန်နေသူဖြစ်လင့်ကစား ထိုကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခြင်းရှင်ပြု ရဟန်ခံခြင်းစတဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တို့ကိုလုပ်ပေမယ့်လို့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က အယူ ဘာသာမတူညီသောကြောင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်က နေ့ထူးနေ့မြတ်၊ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တို့မှာ ဘုရားသွားကျောင်းတတ် ကုသိုလ်ရေစက်တွေ လုပ်ခြင်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ဘာသာခြားဖြစ်နေသည့်အတွက်
လိုလားနှစ်သက်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်ရေရှည်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ကိုယ်ဟာဘာသာရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
၃။ စိတ်နေသဘော ထားတို့ ကွာခြားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်သဘောထားကွာခြားသူဆိုတာ – ကိုယ်က လှူချင် တန်းချင်၊ သီလစောင့်ချင်၊ဘာဝနာတရားပွားများအား ထုတ်ချင်သော်လည်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က
ကိုယ့်လိုစိတ်ထားမျိုး မရှိဘူးဆိုရင် ထိုကုသိုလ်အလုပ်များကို ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူး။ ထို ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခွင့်မရလျှင်
ကိုယ်ရဲ့ဘဝသံသရာ အတွက်ဘာမှ အားကိုးစရာရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိဘဝမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖော်ပြပါ “ကွာသုံးကွာ”ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် အရွေးချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာရှိများ ဆုံးမထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အသိဉာဏ်ပညာ နုံချာသူ။
အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ အတွေးအခေါ် နုံချာနေသူကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ စီးပွားရေး၊
လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေး၊မိသားစုအရေး စတဲ့အရေးတွေမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် တိုးတတ်ကြီးပွားအောင် မကြံစည်နိုင်၊ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပါဘူး၊
အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်စဉ်စား ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ သူများပြောတာ အဟုတ်ထင်ပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ
အကျိုးမဲ့စေမယ့်အလုပ်တွေကိုသာ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွတ်တတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေး မိသားစုအရေး စတာတွေကို နိမ့်ကျသထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေတတ်ပါတယ်။
၂။ စာရိတ္တ နုံချာသူ။
အကျင့်စာရိတ္တ မရှိတဲ့ သူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် aရွးချယ်မိရင်လည်း အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ၊ မိသားစုအရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင်မြင်သေးမှု၊ သံသယမျက်လုံးတွေ နဲ့ကြည့်ခံရမှု၊
ရွံရှာမုန်းတီးမှုတွေကိုပါ လက်ရှိဘဝမှာ ခံရနိုင်သလို ထိုသူအတွက်လည်း တမလွန်ဘဝမှာ အပါယ်လေးပါးကျရောက်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ဘဝပေး နုံချာသူ။
မွေးလာကတည်းက မျက်လုံးကန်းသူ၊ခြေပြတ်၊လက်ပြတ်၊ဆွံ့အ နားမကြားသူများကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင်လည်း ရေရှည်မှာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
တချို့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ဖူးစာလို့ပြောရမလား၊ သနားတယ်လို့ပြောရမလား၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်တာ မျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ် ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း
နေနှင့်လ ရွှေနှင့်မြဆိုတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရှေးပညာရှိများက အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ကြတဲ့ အခါထို ”ချာသုံးချာ”ကို ရှောင်ကြပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည် အနာရောဂါပါလာသူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ကို ဆေးကုပေးရမယ်၊ ဓာတ်စာ ကောင်းကောင်း ဝယ်ကျွေးရမယ်၊
တိုင်းရင်းဆေး၊နိုင်ငံခြားဆေး မျိုးစုံနဲ့ဆေးကုပေးရမယ်၊ဆေးရုံ ဆေးခန်းကောင်းကောင်း တတ်ပြီးဆေးကုပေးရမယ်၊ ကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ဆေးကုပေးနေရတာနဲ့တင်
စီးပွားရေးကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အနုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
အကြွေးပါလာသူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင် သူ့မှာတင်နေတဲ့ အကြွေးကို ကိုယ်က လိုက်ဆပ်ပေးရပါတော့မယ်။ အိမ်ထောင်ပြုခါစ
ထိုထိုအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အကြွေးများကို လိုက်ဆပ်နေရမည် ဆိုလျှင် စီးပွားရေးနလံထူဖို့ရာ အတော်ခက်ခဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။
ထိုသူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်လည်း ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေနိုင် ပါဘူး။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ကုန်ဈေးနှုံတွေက အရမ်းကြီး ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အဆင်မပြေပြန် ရင်လည်း လူမှုရေးအခြေအနေ မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ မကောင်းရင်တော့
ထိုဒဏ်ကို သည်းမခံနိုင်ကြတော့သည့်အဆုံး လင်မယားခန်းပြတ်စဲ တာတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဒါမို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုမည် ဆိုလျှင် မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် မှာ “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတွင် ပါမပါ သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ထို”ကွာ၊ချာ၊ပါ”သုံးမျိုးကို
ရှောင်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာရှိများက အလေးအနက် ညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် အထက်ပါ စာစုသည် ဘုရားဟောဒေသနာ မဟုတ်သည့်အတွက် အချို့သူတွေအတွက် မှန်ချင်မှန်မယ်၊အချို့သူတွေအတွက် မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေသိ ရှေးပညာရှိများ က ပြောပြချက်တွေမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…။
ကှာ သုံး ကှာ၊ ခြာ သုံး ခြာ၊ ပါ သုံး ပါဆို တဲ့ အကွောငျး ဗဟုသုတလေး ပါ လှတျလပျ စှာ ရှယျယူ နိုငျပါသညျ
“အိမျထောငျပွု၊ ဘုရားတညျ၊ဆေးမှငျရညျ စုပျထိုး၊ ကြောငျးထိုငျပငျ့၊မွတျသံဃာ၊ စာခြုပျရနျခကျသညျ့အမြိုး။” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိမြား ဆိုမိနျ့စကားရှိပါတယျ
အရှယျရောကျလာကွသူ အမြိုးသား အမြိုးသမီးတိုငျး (အပြိုကွီး၊လူပြိုကွီးကလှဲရငျ)အိမျထောငျပွုကွ မှာဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျပွုကွတဲ့ အခါမှာလညျး
မိဘပေးစား လို့ အိမျထောငျပွုခွငျး၊ ကိုယျအခငျြးခငျြး မတ်ေတာမြှကွ လို့ အိမျထောငျပွုခွငျးဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ ဘယျလိုပုံစုံမြိုးဖွငျ့ အိမျထောငျပွုပွု
အထူး ဆငျခွငျသငျ့၊ ရှောငျရှားသငျ့သညျ့ “ကှာသုံးကှာ၊ခြာသုံးခြာ၊ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောငျရှားကွပါလို့ ရှေးပညာရှိမြားက သတိပေးပွောဆိုဆုံးမခဲ့ကွပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ အိမျထောငျရေး အဆငျမပွမှေုတှဖွေဈမှာ ဆိုးသညျ့ အတှကျကွောငျ့ပါ။ ဒါကွောငျ့ အိမျထောငျပွုတဲ့ အခါမှာ “ကှာသုံးကှာ၊ ခြာသုံးခြာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုကျနာကွဖို့လိုပါတယျ။
လူမြိုးကှာခွားခွငျး ဆိုတာ လူမြိုးခွားကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈ ရှေးခယျြမိတဲ့ မိနျးကလေး၊ယောကျြားလေးတှဟော ကိုယျ့မှေးဖှားလာမယျ့ ရငျသှေးငယျလေးတှကေ
လူမြိုးခွားစိတျပေါကျသှားရငျ ကိုယျ့လူမြိုးတဖွေးဖွေး တုံးပွီး ပြောကျကှယျ သှားနိုငျလို့ပါ။
၂။ အယူ ဘာသာကှာခွားခွငျး။
အယူဘာသာ ကှာခွားသူကို အိမျထောငျ ဖကျအဖွဈရှေးခယျြ မိတဲ့ သူမြားဟာ ကိုယျကဗုဒ်ဓဘာသာ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက အခွားဘာသာဖွဈနရေငျ
အိမျထောငျရေးအဆငျမပွမှေုတှေ အနညျးနဲ့အမြားဖွဈတတျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ ကိုယျက ဗုဒ်ဓဘာသာဖွဈသညျ့အားလြျောစှာ
ဒါန သီလ ဘာဝနာ တရားမြားကို ကငျြ့ကွံနတေဲ့ သမ်မာဒဋ်ဌိ အယူမှနျနသေူဖွဈလငျ့ကစား ထိုကောငျးမှုမြားကိုပွုလုပျခွငျးရှငျပွု ရဟနျခံခွငျးစတဲ့
ဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ဆိုငျတဲ့ကုသိုလျအလုပျတို့ကိုလုပျပမေယျ့လို့ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက အယူ ဘာသာမတူညီသောကွောငျ့ ဝိုငျးဝနျးဆောငျရှကျပေးခွငျး မရှိနိုငျပါဘူး။
ကိုယျက နထေူ့းနမွေ့တျ၊ကိုယျ့ရဲ့မှေးနတေို့မှာ ဘုရားသှားကြောငျးတတျ ကုသိုလျရစေကျတှေ လုပျခွငျတယျ။ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက ဘာသာခွားဖွဈနသေညျ့အတှကျ
လိုလားနှဈသကျမှာ မဟုတျ ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရငျရရှေညျမှာ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျနဲ့ကိုယျဟာဘာသာရေး နဲ့ပတျသကျလို့ အဆငျမပွမှေုတှဖွေဈကောငျးဖွဈနိုငျ ပါတယျ။
၃။ စိတျနသေဘော ထားတို့ ကှာခွားခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
စိတျသဘောထားကှာခွားသူဆိုတာ – ကိုယျက လှူခငျြ တနျးခငျြ၊ သီလစောငျ့ခငျြ၊ဘာဝနာတရားပှားမြားအား ထုတျခငျြသျောလညျး ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက
ကိုယျ့လိုစိတျထားမြိုး မရှိဘူးဆိုရငျ ထိုကုသိုလျအလုပျမြားကို ကိုယျ့အနနေဲ့ ပွုလုပျဖို့မလှယျကူနိုငျတော့ပါဘူး။ ထို ကုသိုလျကောငျးမှုမြား ပွုလုပျခှငျ့မရလြှငျ
ကိုယျရဲ့ဘဝသံသရာ အတှကျဘာမှ အားကိုးစရာရှိတော့မှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ လကျရှိဘဝမှာလညျး စိတျခမျြးသာမှုတှေ ပြောကျဆုံးသှားနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ဖျောပွပါ “ကှာသုံးကှာ”ကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈ အရှေးခယျြကွဖို့ ရှေးပညာရှိမြား ဆုံးမထားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
၁။ အသိဉာဏျပညာ နုံခြာသူ။
အသိဉာဏျ ဗဟုသုတ အတှေးအချေါ နုံခြာနသေူကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈရှေးခယျြမိပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့အိမျထောငျဖကျဟာ စီးပှားရေး၊
လူမှုရေး၊ကနျြးမာရေး၊ဘာသာရေး၊မိသားစုအရေး စတဲ့အရေးတှမှော အဆငျပွခြေောမှအေ့ောငျ တိုးတတျကွီးပှားအောငျ မကွံစညျနိုငျ၊ မဆောငျရှကျနိုငျတော့ပါဘူး၊
အကောငျးအဆိုး အကွောငျးအကြိုးတှကေို ကိုယျတိုငျစဉျစား ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးမရှိတော့ဘဲ သူမြားပွောတာ အဟုတျထငျပွီး လုပျမိလုပျရာ
အကြိုးမဲ့စမေယျ့အလုပျတှကေိုသာ လုပျကိုငျဆောငျ ရှတျတတျပွီးကိုယျ့ရဲ့မိသားစုအရေး မိသားစုအရေး စတာတှကေို နိမျ့ကသြထကျ နိမျ့ကအြောငျ လုပျနတေတျပါတယျ။
၂။ စာရိတ်တ နုံခြာသူ။
အကငျြ့စာရိတ်တ မရှိတဲ့ သူမြိုးကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈ aရှးခယျြမိရငျလညျး အိမျထောငျရေး အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ ဆငျးရဲဒုက်ခမြိုးစုံတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ
အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျမှုတှေ၊ မိသားစုအရှကျတကှဲ အကြိုးနညျးမှုတှဖွေဈစပေါတယျ၊ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ အထငျမွငျသေးမှု၊ သံသယမကျြလုံးတှေ နဲ့ကွညျ့ခံရမှု၊
ရှံရှာမုနျးတီးမှုတှကေိုပါ လကျရှိဘဝမှာ ခံရနိုငျသလို ထိုသူအတှကျလညျး တမလှနျဘဝမှာ အပါယျလေးပါးကရြောကျနိုငျပါတယျ။
၃။ ဘဝပေး နုံခြာသူ။
မှေးလာကတညျးက မကျြလုံးကနျးသူ၊ခွပွေတျ၊လကျပွတျ၊ဆှံ့အ နားမကွားသူမြားကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈရှေးခယျြမိရငျလညျး ရရှေညျမှာ အိမျထောငျရေးအဆငျပွနေိုငျဖို့ မလှယျပါဘူး။
တခြို့ ဇနီးမောငျနှံတှေ ဖူးစာလို့ပွောရမလား၊ သနားတယျလို့ပွောရမလား၊ အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြတာ မြိုးလညျး ရှိတတျကွပါတယျ ဒါမြိုးဆိုရငျလညျး
နနှေငျ့လ ရှနှေငျ့မွဆိုတာမြိုး မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ရှေးပညာရှိမြားက အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြကွတဲ့ အခါထို ”ခြာသုံးခြာ”ကို ရှောငျကွပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာဖွဈနိုငျပါတယျ။
နာတာရှညျ အနာရောဂါပါလာသူကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြလိုကျရငျလညျးသူ့ကို ဆေးကုပေးရမယျ၊ ဓာတျစာ ကောငျးကောငျး ဝယျကြှေးရမယျ၊
တိုငျးရငျးဆေး၊နိုငျငံခွားဆေး မြိုးစုံနဲ့ဆေးကုပေးရမယျ၊ဆေးရုံ ဆေးခနျးကောငျးကောငျး တတျပွီးဆေးကုပေးရမယျ၊ ကိုယျအိမျထောငျဖကျကို ဆေးကုပေးနရေတာနဲ့တငျ
စီးပှားရေးကောငျးကောငျး မလုပျနိုငျတော့ဘဲ စီးပှားရေးနယျပယျမှာ အနုတျလက်ခဏာတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။
အကွှေးပါလာသူကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈရှေးခယျြမိရငျ သူ့မှာတငျနတေဲ့ အကွှေးကို ကိုယျက လိုကျဆပျပေးရပါတော့မယျ။ အိမျထောငျပွုခါစ
ထိုထိုအိမျထောငျဖကျရဲ့ အကွှေးမြားကို လိုကျဆပျနရေမညျ ဆိုလြှငျ စီးပှားရေးနလံထူဖို့ရာ အတျောခကျခဲ့သှားပါလိမျ့မယျ။
ထိုသူမြိုးကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈရှေးခယျြရငျလညျး ရရှေညျမှာ အဆငျမပွနေိုငျ ပါဘူး။ စီးပှားရေးနယျပယျမှာ ကုနျဈေးနှုံတှကေ အရမျးကွီး ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကိုယျ့အိမျထောငျဘကျနဲ့ အဆငျမပွပွေနျ ရငျလညျး လူမှုရေးအခွအေနေ မကောငျးနိုငျပါဘူး၊ လူမှုရေးအခွအေနေ မကောငျးရငျတော့
ထိုဒဏျကို သညျးမခံနိုငျကွတော့သညျ့အဆုံး လငျမယားခနျးပွတျစဲ တာတှပေါ ဖွဈနိုငျပါတယျ
ဒါမို့ကွောငျ့ အိမျထောငျပွုမညျ ဆိုလြှငျ မိမိရဲ့ အိမျထောငျဖကျ မှာ “ကှာသုံးကှာ၊ခြာသုံးခြာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတှငျ ပါမပါ သုံးသပျပွီးတော့မှ ထို”ကှာ၊ခြာ၊ပါ”သုံးမြိုးကို
ရှောငျပွီးတော့ အိမျထောငျဖကျအဖွဈရှေးခယျြကွဖို့ ရှေးပညာရှိမြားက အလေးအနကျ ညှနျကွားဆုံးမခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မှတျခကျြ အထကျပါ စာစုသညျ ဘုရားဟောဒသေနာ မဟုတျသညျ့အတှကျ အခြို့သူတှအေတှကျ မှနျခငျြမှနျမယျ၊အခြို့သူတှအေတှကျ မှားကောငျးမှားနိုငျပါတယျ။
ဒါပသေိ ရှေးပညာရှိမြား က ပွောပွခကျြတှမေို့ ဖျောပွပေးလိုကျရခွငျး ဖွဈပါတယျ…။
“ယောကျြားအမြားစု ရှိနျကွတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အမူအကငျြ့မြား”
ယောက်ျားအများစု ရှိန်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ…
ယောက်ျားလေး တွေဟာ ဒီလို အရည်အသွေး ရှိ တဲ့
အမျိုးသမီး တွေကို ရှိန်တတ်ကြတယ် …။
(၁) ယောက်ျားတွေရဲ့ အာရုံစိုက် ခံရဖို့ မကြိုးစားပဲ
ရှိရင်းစွဲအတိုင်း ပြုမူ ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်တာ …။
(၂) ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင် ယူတတ် တဲ့
စိတ်အား ထက်သန် မှုတွေ ရှိတာ …။
(၃) ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးလိုစိတ် ရှိတာ …။
(၄) လုပ်သမျှ ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင် တတ်တာ၊
ဘက်စုံ ထူးချွန်နေတာ …။
(၅) မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို ချမှတ်နိုင်တာ …။
(၆) အခြားလူတွေ ရဲ့ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းကို ဂရုမစိုက်ပဲ
ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အရာတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်တတ်တာ …။
(၇) ရဲရင့် ထက်မြက်တာ …။
(၈) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ သန်စွမ်းတာ …။
(၉) မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီဖို့
အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေတတ်တာ …။
(၁၀) မှားနေတဲ့ အခါ ဝန်ချ တောင်းပန်ရဲတာ …။
(၁၁) ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့ သူတွေကို
ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ လမ်းခွဲ ရဲတာ …။
(၁၂) ငွေကြေး ဥစ္စာတွေ၊ ရာထူး ဂုဏ်သိမ်တွေကို မမက်မော တတ်တာ …။
(၁၃) အသစ် တွေကို သင်ယူဖို့ စိတ်အား ထက်သန်နေတာ။
(၁၄) ယောက်ျားတွေကို တွယ်ကပ်ပြီး မနေတတ်တာ …။
(၁၅) ရည်မှန်းချက် ပြင်းပျ လွန်းတာ …။
(၁၆) မိသားစု ရဲ့ ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်နေတာ …။
(၁၇) ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် အကောင်းဆုံး
သင့်ကိုရော အခြားလူတွေ က
ဘာ့ကြောင့် ရှိန်နေတယ်လို့ ထင်လဲ …???
ယောကျြားအမြားစု ရှိနျကွတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အမူအကငျြ့မြား…
ယောကျြားလေး တှဟော ဒီလို အရညျအသှေး ရှိ တဲ့
အမြိုးသမီး တှကေို ရှိနျတတျကွတယျ …။
(၁) ယောကျြားတှရေဲ့ အာရုံစိုကျ ခံရဖို့ မကွိုးစားပဲ
ရှိရငျးစှဲအတိုငျး ပွုမူ ပွောဆို ဆကျဆံတတျတာ …။
(၂) ကိုယျလိုခငျြတာကို ရအောငျ ယူတတျ တဲ့
စိတျအား ထကျသနျ မှုတှေ ရှိတာ …။
(၃) ကိုယျ့အား ကိုယျကိုးလိုစိတျ ရှိတာ …။
(၄) လုပျသမြှ ကို အကောငျးဆုံး လုပျဆောငျ တတျတာ၊ ဘကျစုံ ထူးခြှနျနတော …။
(၅) မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တှကေို ခမြှတျနိုငျတာ …။
(၆) အခွားလူတှေ ရဲ့ ခဈြခွငျး မုနျးခွငျးကို ဂရုမစိုကျပဲ
ကိုယျလုပျရမယျ့ အရာတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျပွီးလုပျတတျတာ …။
(၇) ရဲရငျ့ ထကျမွကျတာ …။
(၈) စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာ သနျစှမျးတာ …။
(၉) မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှကေို ကူညီဖို့
အမွဲတမျး အဆငျသငျ့ ဖွဈနတေတျတာ …။
(၁၀) မှားနတေဲ့ အခါ ဝနျခြ တောငျးပနျရဲတာ …။
(၁၁) ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးတဲ့ သူတှကေို
ပွတျပွတျသားသားနဲ့ လမျးခှဲ ရဲတာ …။
(၁၂) ငှကွေေး ဥစ်စာတှေ၊ ရာထူး ဂုဏျသိမျတှကေို
မမကျမော တတျတာ …။
(၁၃) အသဈ တှကေို သငျယူဖို့ စိတျအား ထကျသနျနတော။
(၁၄) ယောကျြားတှကေို တှယျကပျပွီး မနတေတျတာ …။
(၁၅) ရညျမှနျးခကျြ ပွငျးပြ လှနျးတာ …။
(၁၆) မိသားစု ရဲ့ ရှတေ့နျး တိုကျစဈမှုး ဖွဈနတော …။
(၁၇) ကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျ အကောငျးဆုံး
သငျ့ကိုရော အခွားလူတှေ က
ဘာ့ကွောငျ့ ရှိနျနတေယျလို့ ထငျလဲ …???
“FB သုံးတာ ဒီလိုပို့ဈမြိုးတှကွေောငျ့ ဘလျေ ကုနျရကြိုး နပျနတောပါ (မကျြရညျခိုငျရငျတော့ ဖတျကွညျ့စခေငျြတယျ )”
ဖတ်ကြည့်မှ……သိမှာမို့…..ဖတ်ကြည့်နော့ ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ…… လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ်… အချိန်တော်တော်ကြာမှအသက်ကယ်လှေတစ်စင်းရောက်လာတယ်…
အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ်… အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ်…
အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကို စကားတစ်ခွန်းအော်ပြောလိုက်တယ်… ဒီနေရာအထိပြောပြီးတော့ ဆရာမကကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်တယ်…
“မင်းတို့ ခန့်မှန်းကြည့်…အမျိုးသမီးက ဘာအော်ပြောလိုက်သလဲ?” ကျောင်းသားတွေကတော့ အလုအယက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ အော်ပြောကြတယ်…“ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်… ငါကို ထားပစ်ရစ်ခဲ့တယ်… ”
အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကိုဘာမှမပြောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်… အဲဒီကျောင်းသူလေးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…“ဆရာမ… သမီး ထင်တယ်…
အဲဒီ အမျိုးသမီးအော်ပြောလိုက်မှာက …ငါတို့ကလေးကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးပါ လို့”… ဆရာမက အံ့သြသွားတယ်…သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်တယ်…“အဲဒီ ပုံပြင်ကို နားထောင်ဖူးလို့လာ?” ကျောင်းသူလေးက ခေါင်းကို ခါပြီး ပြောလိုက်တယ်…
“ဟင့်အင်း… သမီး မေမေ နေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆုံးခါနီးမှာ ဒီစကားဟာ သူ ဖေဖေ့ကို ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ…” ဆရာမက ပြန်ပြောလိုက်တယ် ….“အဖြေမှန်ပါတယ်ကွယ်…”သင်္ဘော နစ်မြှုပ်သွားပါတယ်…
ယောက်ျားက သူ့မြို့ကို ပြန်ရောက်ပြီးသမီးလေးကို ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ ကိုယ်တိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်… နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်အဲဒီယောက်ျားဟာလဲ ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားတော့…
သမီးဖြစ်သူက သူကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှင်းတော့မှသူ့ဖေဖေရဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုတွေ့တယ်… အဲဒီအချိန်ရောက်မှ သူသိလိုက်တယ်…ဖေဖေနဲ့ မေမေ သင်္ဘောအတူစီးတဲ့အချိန်မှာ မေမေ့ရောဂါဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ…
အရေးပေါ်အချိန်မှာဖေဖေဟာ အသက်ရှင်ဖို့တစ်မျှင်တာရှိတဲ့နေရာကို အရောက်ပြေးခဲ့တယ်… သူ့ရဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာရေးထားတာက“ငါ မင်းနဲ့ ဒီပင်လယ်အောက်ကို အတူတူသာနစ်မြှုပ်သွားလိုက်ချင်ပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…သမီးလေးအတွက်ကြောင့်…. ဒီပင်လယ်ရေနက်အောက်မှာ..နင်တစ်ယောက်တည်းကိုဘဲထားခဲ့လိုက်ရတာပါ…” ပုံပြင်ပြောလို့ပြီးသွားပါပြီ…အခန်းထဲမှာလဲ ငြိမ်သက်သွားပါတယ်…ဆရာမကသိတယ်…
သူ့ကျောင်းသားတွေ ဒီပုံပြင်ရဲ့ အနှစ်သာရကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့… ဒီလောကမှာရှိတဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း ဆိုတာတွေ…တခါတလေမှာ ပွေလီရှုပ်ထွေးလှပါတယ်…
ပိုင်းခြားရမှာ ခက်ခဲလှပါတယ်…ဒါကြောင့် အရာရာတိုင်းကို အပေါ်ယံဘဲကြည့်ပြီးအလွယ်တကူ ဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့မရပါဘူး… ပိုက်ဆံရှင်းချိန်မှာပိုက်ဆံအရင်ထုတ်ပြီးရှင်းတဲ့သူဟာ…သူ ပိုက်ဆံ အရမ်းချမ်းသာနေလို့မဟုတ်ဘူး…
သူက ဒီသူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်ကိုငွေကြေးထက်ပိုပြီး အလေးထားလို့ပါ… အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ အသိစိတ်နဲ့ပိုပြီးကြိုးစားလုပ်တဲ့သူဟာသူ အ နေလို့မဟုတ်ဘူး…သူက တာဝန်သိတတ်လို့ပါ…
ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံး တောင်းပန်တဲ့သူဟာသူမှားနေလို့မဟုတ်ဘူး…ကိုယ့်ဘေးက လူကိုသူ တန်ဖိုးထားရမှန်းသိနေလို့ပါ… မင်းကိုအမြဲကူညီနေတဲ့သူဟာမင်းဆီကနေ တစ်ခုခုပြန်ရဖို့တောင့်တနေတာမဟုတ်ဘူး…
မင်းကို သူငယ်ချင်းအစစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားလို့ပါ… မင်းကို အမြဲ မက်ဆေ့ပို့ ဆက်သွယ်နေတဲ့သူဟာသူအားယားနေလို့မဟုတ်ပါဘူး…ဒါဟာ သူ့ စိတ်ထဲမှာ မင်း ရှိနေလို့ပါဘဲ…
ဖတျကွညျ့မှ……သိမှာမို့…..ဖတျကွညျ့နော့ ဖတျစခေငျြလှနျးလို့ပါ…… လငျမယား စုံတှဲတဈတှဲပါလာတဲ့သင်ျဘောတဈစငျး နဈမွှုပျသှားတယျ… အခြိနျတျောတျောကွာမှအသကျကယျလှတေဈစငျးရောကျလာတယျ…
အသကျကယျလှပေျေါမှာ နရောဆိုလို့တဈနရောဘဲ ကနျြတော့တယျ… အဲဒီအခြိနျမှာ ယောကျြားဖွဈသူက သူ့မိနျးမကိုသူ့အနောကျဆှဲခလြိုကျပွီး သူကိုယျတိုငျအသကျကယျလှပေျေါခုံတကျလိုကျတယျ…
အဲဒီ အမြိုးသမီး ကတော့တဖွညျးဖွညျးခငျြးနဈမွှုပျနတေဲ့သင်ျဘောပျေါမှာရပျပွီးသူ့ယောကျြားကို စကားတဈခှနျးအျောပွောလိုကျတယျ… ဒီနရောအထိပွောပွီးတော့ ဆရာမကကြောငျးသားတှကေို မေးလိုကျတယျ…
“မငျးတို့ ခနျ့မှနျးကွညျ့…အမြိုးသမီးက ဘာအျောပွောလိုကျသလဲ?” ကြောငျးသားတှကေတော့ အလုအယကျဒေါနဲ့မောနဲ့ အျောပွောကွတယျ…“ငါနငျ့ကိုမုနျးတယျ… ငါကို ထားပဈရဈခဲ့တယျ… ”
အဲဒီအခြိနျမှာ ဆရာမကကြောငျးသူလေးတဈယောကျကိုဘာမှမပွောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုကျတယျ… အဲဒီကြောငျးသူလေးက ပွနျဖွလေိုကျတယျ…“ဆရာမ… သမီး ထငျတယျ…
အဲဒီ အမြိုးသမီးအျောပွောလိုကျမှာက …ငါတို့ကလေးကို ကောငျးကောငျးဂရုစိုကျပေးပါ လို့”… ဆရာမက အံ့သွသှားတယျ…သူ့ကို ပွနျမေးလိုကျတယျ…“အဲဒီ ပုံပွငျကို နားထောငျဖူးလို့လာ?” ကြောငျးသူလေးက ခေါငျးကို ခါပွီး ပွောလိုကျတယျ…
“ဟငျ့အငျး… သမီး မမေေ နမေကောငျးဖွဈပွီးဆုံးခါနီးမှာ ဒီစကားဟာ သူ ဖဖေကေို့ ပွောခဲ့တဲ့စကားပါ…” ဆရာမက ပွနျပွောလိုကျတယျ ….“အဖွမှေနျပါတယျကှယျ…”သင်ျဘော နဈမွှုပျသှားပါတယျ…
ယောကျြားက သူ့မွို့ကို ပွနျရောကျပွီးသမီးလေးကို ကွီးပွငျးလာတဲ့အထိ ကိုယျတိုငျပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တယျ… နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပွီးနောကျအဲဒီယောကျြားဟာလဲ ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသှားတော့…
သမီးဖွဈသူက သူကနျြရဈခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ရှငျးတော့မှသူ့ဖဖေရေဲ့ နစေ့ဉျမှတျတမျးစာအုပျကိုတှတေ့ယျ… အဲဒီအခြိနျရောကျမှ သူသိလိုကျတယျ…ဖဖေနေဲ့ မမေေ သင်ျဘောအတူစီးတဲ့အခြိနျမှာ မမေရေ့ောဂါဟာ နောကျဆုံးအဆငျ့ကိုရောကျနပေါပွီ…
အရေးပျေါအခြိနျမှာဖဖေဟော အသကျရှငျဖို့တဈမြှငျတာရှိတဲ့နရောကို အရောကျပွေးခဲ့တယျ… သူ့ရဲ့ မှတျတမျးစာအုပျမှာရေးထားတာက“ငါ မငျးနဲ့ ဒီပငျလယျအောကျကို အတူတူသာနဈမွှုပျသှားလိုကျခငျြပါတယျ…
ဒါပမေဲ့ ဒါဟာ မဖွဈနိုငျပါဘူး…သမီးလေးအတှကျကွောငျ့…. ဒီပငျလယျရနေကျအောကျမှာ..နငျတဈယောကျတညျးကိုဘဲထားခဲ့လိုကျရတာပါ…” ပုံပွငျပွောလို့ပွီးသှားပါပွီ…အခနျးထဲမှာလဲ ငွိမျသကျသှားပါတယျ…ဆရာမကသိတယျ…
သူ့ကြောငျးသားတှေ ဒီပုံပွငျရဲ့ အနှဈသာရကိုနားလညျလိမျ့မယျလို့… ဒီလောကမှာရှိတဲ့ ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျး ဆိုတာတှေ…တခါတလမှော ပှလေီရှုပျထှေးလှပါတယျ…
ပိုငျးခွားရမှာ ခကျခဲလှပါတယျ…ဒါကွောငျ့ အရာရာတိုငျးကို အပျေါယံဘဲကွညျ့ပွီးအလှယျတကူ ဝဖေနျပိုငျးခွားလို့မရပါဘူး… ပိုကျဆံရှငျးခြိနျမှာပိုကျဆံအရငျထုတျပွီးရှငျးတဲ့သူဟာ…သူ ပိုကျဆံ အရမျးခမျြးသာနလေို့မဟုတျဘူး…
သူက ဒီသူငယျခငျြး သံယောဇဉျကိုငှကွေေးထကျပိုပွီး အလေးထားလို့ပါ… အလုပျလုပျခြိနျမှာ အသိစိတျနဲ့ပိုပွီးကွိုးစားလုပျတဲ့သူဟာသူ အ နလေို့မဟုတျဘူး…သူက တာဝနျသိတတျလို့ပါ…
ရနျဖွဈတဲ့အခြိနျမှာအရငျဆုံး တောငျးပနျတဲ့သူဟာသူမှားနလေို့မဟုတျဘူး…ကိုယျ့ဘေးက လူကိုသူ တနျဖိုးထားရမှနျးသိနလေို့ပါ… မငျးကိုအမွဲကူညီနတေဲ့သူဟာမငျးဆီကနေ တဈခုခုပွနျရဖို့တောငျ့တနတောမဟုတျဘူး…
မငျးကို သူငယျခငျြးအစဈတဈယောကျအနနေဲ့တနျဖိုးထားလို့ပါ… မငျးကို အမွဲ မကျဆပေို့ ဆကျသှယျနတေဲ့သူဟာသူအားယားနလေို့မဟုတျပါဘူး…ဒါဟာ သူ့ စိတျထဲမှာ မငျး ရှိနလေို့ပါဘဲ…
အိမ်ထောင်သက်တမ်း ရင့်လာတဲ့ ဇနီးမယား တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ယောင်္ကျား အကြောင်းကို သူမွေးထားတဲ့ အမေထက် ပိုပီး သိတယ်။ အကြည့်တစ်ချက် စကားတစ်ခွန်း ကိုယ်အမူအယာ အပြောင်းအလဲက အစ ဘယ်ခြေကို လှမ်းပြီး ဘယ်ကမ်း ကပ်မလဲ ဆိုတာပါ သိတယ်။
ပါးစပ်ဟ လိုက်တာနဲ့ အူဘယ်နှစ်ခွေ တင်မကဘူး ရင်ထဲက အသည်း နှလုံး ကျောက်ကပ် ထိပါ မြင်တာ။ စကားတွေ တောပြော တောင်ပြော ပြောချင်ရာပြော တစ်လုံးချင်း မှတ်ပြီး ဘာသာတွေ ပြန်နေတဲ့ သူတွေ။ ရယ်စရာ ပြောပြော အတည်ပြောပြော ရင်ထဲ အကုန် သိမ်းပြီး အကန့်တွေခွဲထည့်နေကျ။
လိုအပ်လာရင်ဘယ်အချိန်က ဘယ်မှာ ဘယ်လို ပြောခဲ့တာ ဆိုတာကအစ အတိအကျ ပြန်ပြောနိုင်ကြသူချည်းပဲ။ တခြားလူတွေကိုသာ အမှတ်မထားရင်နေမယ် ကိုယ့်လင် ပြောတာ အကုန်အမှတ်ရတယ်။ မမှတ်မိဘူး ဆိုတာ အလကား.. မမှတ်မိချင်လို့သာ မမှတ်မိတာ။ မှတ်မိချင်တာ အကုန် မှတ်မိတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။
ဟာ… မိန်းမကလဲကွာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. မလုပ်ပါဘူးကွာ.. ဆိုတာကို မျက်စေ့မှိတ် ယုံနေကြတာ မဟုတ်ဖူး။ တစ်ခါတစ်လေ ပလစ်လို့ရလို့ ပလစ် ပေးထားတာ။ တစ်ခါတစ်လေကျ ငါ့ကို လိမ်နေတာ ဆိုတာ သိသိနဲ့ တမင် အလိမ်ခံ နေကြရတာ။
လိမ်စမ်း ကြိုက်သလောက် ဆိုပြီး တစ်ခါတစ်လေ မျက်လုံးလေးမှေး လက်လေးပိုက်ပြီး ခပ်မဲ့မဲ့ပြုံးရင်း ကြည့်နေတတ် ကြသေးတာ။ ကိုယ့်ယောင်္ကျား ချောက်ထဲ လှမ်းသလား.. အပေါက်ထဲ လှမ်းသလား သိပ်သိတာပေါ့။ အေး.. သိပ် စိတ်နာလာရင် အဲ့ချောက်တွေ အဲ့ အပေါက်တွေထဲ တွင်းဆုံးကျအောင် ကူတွန်းပေး ချင်ပေးကြအုံးမှာ။
ပြောချင်တာက ငါ့မိန်းမ မသိလောက်ပါဘူး လို့ ထင်မနေကြနဲ့ လို့။ သိတယ် သိတယ် အကုန်သိတယ်။ မသိချင်ယောင် ဆောင်တာနဲ့ မသိချင်လို့ ပလစ်ထားတာ ပဲ ရှိတယ်လို့။
အိမျထောငျသကျတမျး ရငျ့လာတဲ့ ဇနီးမယား တဈယောကျဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ယောင်ျကြား အကွောငျးကို သူမှေးထားတဲ့ အမထေကျ ပိုပီး သိတယျ။ အကွညျ့တဈခကျြ စကားတဈခှနျး ကိုယျအမူအယာ အပွောငျးအလဲက အစ ဘယျခွကေို လှမျးပွီး ဘယျကမျး ကပျမလဲ ဆိုတာပါ သိတယျ။
ပါးစပျဟ လိုကျတာနဲ့ အူဘယျနှဈခှေ တငျမကဘူး ရငျထဲက အသညျး နှလုံး ကြောကျကပျ ထိပါ မွငျတာ။ စကားတှေ တောပွော တောငျပွော ပွောခငျြရာပွော တဈလုံးခငျြး မှတျပွီး ဘာသာတှေ ပွနျနတေဲ့ သူတှေ။ ရယျစရာ ပွောပွော အတညျပွောပွော ရငျထဲ အကုနျ သိမျးပွီး အကနျ့တှခှေဲထညျ့နကြေ။
လိုအပျလာရငျဘယျအခြိနျက ဘယျမှာ ဘယျလို ပွောခဲ့တာ ဆိုတာကအစ အတိအကြ ပွနျပွောနိုငျကွသူခညျြးပဲ။ တခွားလူတှကေိုသာ အမှတျမထားရငျနမေယျ ကိုယျ့လငျ ပွောတာ အကုနျအမှတျရတယျ။ မမှတျမိဘူး ဆိုတာ အလကား.. မမှတျမိခငျြလို့သာ မမှတျမိတာ။ မှတျမိခငျြတာ အကုနျ မှတျမိတဲ့ သူတှခေညျြးပဲ။
ဟာ… မိနျးမကလဲကှာ မဟုတျပါဘူးကှာ.. မလုပျပါဘူးကှာ.. ဆိုတာကို မကျြစမှေိ့တျ ယုံနကွေတာ မဟုတျဖူး။ တဈခါတဈလေ ပလဈလို့ရလို့ ပလဈ ပေးထားတာ။ တဈခါတဈလကြေ ငါ့ကို လိမျနတော ဆိုတာ သိသိနဲ့ တမငျ အလိမျခံ နကွေရတာ။
လိမျစမျး ကွိုကျသလောကျ ဆိုပွီး တဈခါတဈလေ မကျြလုံးလေးမှေး လကျလေးပိုကျပွီး ခပျမဲ့မဲ့ပွုံးရငျး ကွညျ့နတေတျ ကွသေးတာ။ ကိုယျ့ယောင်ျကြား ခြောကျထဲ လှမျးသလား.. အပေါကျထဲ လှမျးသလား သိပျသိတာပေါ့။ အေး.. သိပျ စိတျနာလာရငျ အဲ့ခြောကျတှေ အဲ့ အပေါကျတှထေဲ တှငျးဆုံးကအြောငျ ကူတှနျးပေး ခငျြပေးကွအုံးမှာ။
ပွောခငျြတာက ငါ့မိနျးမ မသိလောကျပါဘူး လို့ ထငျမနကွေနဲ့ လို့။ သိတယျ သိတယျ အကုနျသိတယျ။ မသိခငျြယောငျ ဆောငျတာနဲ့ မသိခငျြလို့ ပလဈထားတာ ပဲ ရှိတယျလို့။